Adeegyo kala duwan oo ajaanibku u baahan karaan | Samfunnskunnskap.no
Qofka Norwey ku cusub wuxuu badanaa la kulmayaa xafiisyo iyo hay’ado badan oo kala duwan. Tusaale ahaan waxa kuwan ka mid ah Diiwaanka dadka, xafiiska xannaanada carruurta, rugta caafimaadka, Waaxda cashuuraha iyo Nav.
Halkan waxaan ku yara eegaynaa qaar ka mid ah kuwaas.
Waa muhiim in la ogaado waxyaabaha xafiisyada kala duwani qabtaan, iyo sida lagu helayo. Sida ugu badan ee hada lagula xidhiidho hay’adaha dawlada waa internetka. Internetka waxa lagala soo bixi karaa foomam badan, waxa macluumaad badan laga heli karaa marka la galo bogaga intenetka ee hay’adaha la doonayo. Dhammaan degmooyinku waxey leeyihiin internet u gaar ah oo laga helayo macluummad loogu talogaley dadka degan.
Waaxda cashuuruhu waxey masuul ka tahey in cashuuraha iyo lacagaha la iska jaro la bixiyo. Marka aad Norwey ka shaqayneyso waxaad u baahantahey kaadhka cashuurta. Marka ugu horreysa ee aad u baahato kaadhka cashuurta waa inaad ka codsato
Waxa toos loogu dirayaa cidda aad u shaqeyso kaas oo muujinaya inta ay le’egtahey cashuurta laga jaaryo musharkaag bil kasta.
Diiwaanka dadka waa qeyb ka mid ah waaxda cashuuraha. Waa diiwaan dawladeed oo ey ku jiraan dhammaan dadka Norwey degan ama deganaan jirey. Qof kasta oo cinwaankiisa bedelaa waa inuu mudo sideed cisho gudahood ah marka uu guurey kadib ku soo ogeysiiyo diiwaanka dadka. Tan waxa laga sameyn karaa internetka.
Diiwaanka dadku waxa kale oo uu masuul ka yahey bedelida magaca iyo siinta lambarka dhalashada iyo D-lambar. Haddii la guursanayo, waa in lala xidhiidho diiwaanka dadka.
Nav waa xafiis dawladeed oo bixiya adeegyo badan oo kala duwan. Nav waxey masuul ka tahey sida:
kaalamada carruurta (barnetrygd)
lacagta shaqo la’aanta
Lacagta dadka aan shaqayn karin
Nav waxa kale oo ey u adeegtaa dadka bilaa shaqada ah. Dad badan ayaa dhigta koorasyo ey Nav ka bixiso, ujeedada koorasyadani waa in ka qeybqaadayaashu shaqo helaan.
Waqtiga ka horeeya inta qofka ajinebiga ahi ka baranayo afoorwiijiga waa lagama maarmaan in la isticmaalo turjumaan. Shaqaalaha dawlada sida Nav, booliiska iyo adeega caafimaadka waxa saaran waajib ah in macluumaadka iyo talooyinkooda ey bixiyaan la fahmo. Sidaa darteed ayuu ajinebigu xaq turjumaan u leeyahey, waxaana bixinaya dawlada.